Longview Aviation Capital mampiato ny famokarana ny fiaramanidina Dash 8-400 sy Series 400 Twin Otter
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Longview Aviation Capital mampiato ny famokarana ny fiaramanidina Dash 8-400 sy Series 400 Twin Otter
Longview Aviation Capital Corp., orinasa ray aman-dreny an'ny De Havilland Aircraft an'ny Canada Limited ary Viking Air Limited, androany dia nanambara ny fampiatoana ny asa famokarana ho an'ny fiaramanidina vaovao Dash 8-400 ao amin'ny De Havilland's Downsview trano any Toronto, ary ny fiaramanidina vaovao Series 400 Twin Otter ao amin'ny tranoben'ny Viking any Victoria, BC ary Calgary, Alberta.
Hiato ny famokarana amin'ireo fiaramanidina ireo mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Mpiasa 800 eo ho eo na 65% ny mpiasan'i De Havilland amin'izao fotoana izao, ary mpiasa 180 na 40% ny mpiasa Viking ankehitriny no voakasik'izany.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina manerantany dia miatrika tsy fahazoana antoka mbola tsy nisy toa azy noho ny vokatry ny virus coronavirus (COVID-19). Longview sy ireo orinasany dia nifandray akaiky tamin'ny mpanjifa sy ny mpamatsy tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Miorina amin'ireto dinika ireto, ary manohitra ny fihemoran'ny hetsiky ny seranam-piaramanidina mihena be, dia tapa-kevitra i Longview fa ilaina ny mampiato ny hetsika famokarana fiaramanidina vaovao amin'izao fotoana izao.
Ny fampiatoana fiaramanidina vaovao dia tsy mihatra afa-tsy. Samy manohy manome fanohanana vokatra feno sy serivisy teknika ho an'ny fiaramanidina De Havilland sy Viking rehetra i De Havilland sy Viking. Ireo hetsika asa fandraharahana Longview hafa rehetra dia hitohy toy ny mahazatra, ao anatin'izany:
Ny hetsiky ny mpanjifa, anisan'izany ny ampahany, ary ny fanampiana fiaramanidina miasa
CL-415EAF Fiovam-po "Enhanced Aerial Firefighter" amin'ny alàlan'ny Longview Aviation Services
Hetsika fanofana fiaramanidina amin'ny alàlan'ny Longview Aviation Asset Management
"Fotoana fanamby goavana ho an'ny indostria sy ho an'ny mpanjifantsika io fotoana io, ary tsy maintsy mampifanaraka an'ity zava-misy vaovao ity isika - antenaina fa tsy maharitra", hoy i David Curtis, Filohan'ny Executive, Longview Aviation Capital Corp. "Amin'ity lafiny ity dia hifantoka isika ny ezaka ataonay amin'ny fanohanana ny sambo mpiasan'ny mpanjifa misy anay ary ny fanomezana serivisy hafa omen'ny orinasanay ny indostrian'ny fiaramanidina manerantany. Hifandray akaiky hatrany amin'ny mpanjifanay izahay ary hanohy hanara-maso ny toe-draharaha mivoatra. Hanao fanitsiana bebe kokoa amin'ny asanay araka izay takiana izahay. ”
Longview dia manantena ny hamerenana ny asany amin'ny famokarana fiaramanidina rehefa mihatsara ny fepetra - mifototra amin'ny hetsika sy fivoarana eo an-toerana, nasionaly ary iraisam-pirenena.
Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa dia hijanona amin'ny fifandraisana matetika amin'ny mpanjifa - ary hanara-maso akaiky sy hanombana ny toetoetran'ny tsena.
Samy nametraka drafitra fitohizan'ny asa i De Havilland sy Viking mba hiantohana ireo orinasa hatsangana hanompo ny mpanjifa, ary nandamina ny fandaminana asa mba hisorohana ny fihanaky ny aretina na eo aza ny famelana ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny tohana vokatra.
Ny fiasan'ny orinasa Longview hafa dia mitohy amin'ny alàlan'ny kaonty fiarovana sy fiarovana azo antoka.
"Ny fahasalaman'ny mpiasanay sy ny vondrom-piarahamoninay no laharam-pahamehana indrindra," hoy Andriamatoa Curtis. "Hanohy hanaraka tsara ireo toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka izahay ary handray ny dingana azonay hanohanana ny tanjona ankapobeny hisorohana ny fihanaky ny viriosy."